Liverpool oo sii dheereysatay hogaanka horyaalka, xilli Chelsea ay guuldarro kala kulantay West Ham … +SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(England) 30 Nof 2019. Liverpool ayaa guul muhiim ah kaga gaartay garoonkeeda Anfield, kooxda Brighton & Hove Albion, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool.
Daqiiqadii 18-aad ee dheesha Liverpool ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay daafacooda birta ah ee Virgil Van Dijk, waxaana goolka ka caawiyay saaxiibkiis Trent Alexander-Arnold.
Markale daqiiqadii 24-aad Liverpool ayaa la timid gool labaad, waxaana 2-0 ka dhigay Virgil Van Dijk, iyadoo uu markale goolkan ka caawiyay Trent Alexander-Arnold.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay ciyaarta, labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sameeyeen fursado badan ee goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 78-aad kooxda Brighton & Hove Albion ayaa la timid gool, kaddib markii uu ciyaarta ka dhigay 2-1, laacibka lagu magacaabo Lewis Dunk.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 ay Liverpool guul kaga gaartay Brighton & Hove Albion oo marti ugu aheyd garoonka Anfield.
Dhanka hoose kaga boggo natiijooyinkii kulamadii kale ee isla waqtigan laga ciyaaray horyaalka Premier League ee dalka England.
Tottenham Hotspur 3 – 2 AFC Bournemouth.
Kooxaha ka dheela horyaalka Premier League qaarkood oo xiiseynaya Kurzawa
Jadon Sancho oo ogolaaday inuu u dhaqaaqo Kooxda Manchester United